Udedelwe ngezizumbulu osolwa ngokubulala umkakhe | News24
Udedelwe ngezizumbulu osolwa ngokubulala umkakhe
Polokwane – Usomabhizinisi waseLimpopo uRameez Patel, osolwa ngokubulala unkosikazi wakhe uFatima, ukhululwe ngebheyili ka-R250 000 eNkantolo yeMantshi yasePolokwane ngoLwesibili.
IMantshi uMohammed Shaik uthe kunezizathu eziphoqayo, ezifana nokuthi izingane zalezi zithandani zidinga ukunakekelwa, ngakho kumele ummangalelwa aphume ngebheyili.
UShaik uyalele Patel ukuba aye esiteshini samaphoyisa esiseWesterberg kathathu ngelanga, futhi angahambi emzini wakhe ngaphandle kokwazisa umphenyi wecala.
OLUNYE UDABA: Isinqumo sebheyili kosolwa ngokubulala umkakhe
Kuthiwe futhi uPatel kuyaphoqa ukuthi azihambise emaphoyiseni izincwadi zokuhambela amazwe zezingane aphide aqinisekise ukuthi akaxhumani nofakazi boMbuso.
UPatel usolwa ngokudubula unkosikazi wakhe emzini abebeqashe kuwo eNirvana, ePolokwane, ngomhlaka-10 Ephreli.
Ummangalelwa uzobuyela enkantolo ngomhlaka-7 Julayi.